Maqaallada Barry Kelly Martech Zone |
Maqaallada by Barry Kelly
Barry Kelly waa agaasime guud iyo aasaasaha Warshadaha Fikirka. Isagu waa horyaal barasho macmiil, suuqle iyo hal-abuure barasho casri ah. Xirfadiisa waxaa diiradda lagu saaray caawinta magacyada iyo ururada ka kooban waxyaabaha looga faa'iideysto awoodda e-barashada si kor loogu qaado loona kobciyo ganacsiyadooda.
Sabtida, Oktoobar 17, 2015 Jimco, Oktoobar 16, 2015 Barry Kelly
Waxaan aragnay koror aan caadi aheyn oo ku saabsan suuqgeynta waxyaabaha sanadihii la soo dhaafay-ku dhowaad qof walba wuu fuulayaa. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay Machadka Suuqgeynta Macluumaadka, 86% ee suuqleyda B2B iyo 77% ee suuqleyda B2C waxay isticmaalaan suuqgeynta waxyaabaha ku jira. Laakiin ururada caqliga ayaa u qaadaya istiraatiijiyadooda suuq geynta waxyaabaha heerka ku xiga oo ay ku darayaan waxyaabaha ku jira barashada internetka. Sababta Dadku waxay u gaajaysan yihiin nuxurka waxbarasho, waxay jecelyihiin inay waxbadan bartaan. Sida laga soo xigtay Ambient Insight Report, suuqa adduunka ee